Hiran State - News: HS:- Shirkii Saxiixayaasha ee Kenya ka socday oo natiijo la,aan ku dhamaaday
HS:- Shirkii Saxiixayaasha ee Kenya ka socday oo natiijo la,aan ku dhamaaday
HS:- Siyaasada Soomaaliya oo 24tii saac ee kastaba isbedeleyso ayaa waxaa la dhihi karaa waxey hada mareysaa meeshii ugu danbeysay iyadoo siyaasi kasta la soo baxayo qiyaanadii ugu danbeysay ee uu is leeyahay wax baad ku noqon kartaa amaba waad kaka taqalusin kartaa hadba qofka uu siyaasad ahaan uga soo horjeedo.
Inkasta oo ay reer Puntland isku dayayaan in ay gacanta ku dhigaan siyaasad ahaan iyo maskax ahaanba gudoomiyahii hore ee baarlamanka Shariif Hasan hadane waxey iskood u wataan siyaasado aan la ogeyn sidey uga shaqeyn doonto koofurta Soomaaliya.
Warar xaqiiqada u dhaw ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu ka imaanayo muran la,aan beelaha Hawiye xitaa hadii la soo hormariyo doorashada madaxweynaha oo dib loo dhigo mida gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya reerkaas ayuu ka imaanayaa sida la xaqiijiyey walow la sameynayo wax u muuqaal eg doorasho.
Arintaan ayey dhabar jab ku tahay r/wasaare Gaas oo isagu ilaa 5 wasiiro oo ka mid ah xukuumadiisa oo iskugu jira beelaha Hawiye iyo Digil iyo Mirifle mid kasta gooyni ugu sheegay in uu ka dhigi doono R/wasaare hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxey dhabar jab ku tahay wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warfaafinta Cabdullaahi Godax Bare iyo Jaahweyn oo iyagu midkasta R/wasaare Gaas dhabarka ka taabtay inuu noqon doono R/wasaare.
Warar kale ayaa sheegayo marka la eego isbed bedelka siyaasadeed ee reer Puntland oo ah mid aan fadhinin hadba meeshii ay dantooda ka dhax arkaane u guura ayaa sheegaya in ujeedada ay ka leeyahiin Shariif Hasan ay tahay sidii ay u kala fogeyn lahaayeen isaga iyo Shiikh Shariif si hadii Shariifka mar labaad ku guuleysto ay halkaas jaanis ugu helaan.
Sikastaba waxaa la wada sugayaa sida marka Mogdishu ay ku laabtaan r/wasaare Gaas iyo Shariif Hasan loogu soo dhaweeyo Mogdishu oo ay dadku iskugu soo baxaan madaama maalintii shaleyto aheyd madaxweyne Shariif muujiyey awoodiisa siyaasadeed iyo taageerada uu ka heysto shacabka Mogdishu, taasi oo yaab iyo amakaak ku riday ciidamada midowga Africa ee ka howl gala Mogdishu.
Marka la eego qodobada la filayey iney ka soobaxan shirkii ka socday Kenya waxuu ahaa mid marka nuxurkiisa rasmiga ah la eego lagu dhax dhaxaadinayey maamulada Khaatumo State iyo Puntland amaba hadaan si kale u dhigno qaar ka mid ah beelaha Daarood waayo qodobada markaad aragto maba ahan wax quseeya Soomaaliweyn ayuu yiri xaaji Mohamed oo ka mid ah Soomaalida Kenya.sidoo kale wax yaabaha keenay in ay shirka wax la taaban karo ka soo bixi waayaan waxaa ka mid ah maadama uu iskaka baxay mid ka mid ah saxiixyaashii Roadmapka waxkasta oo lagu heshiiyo ma shaqeynayaan taasina waxey keentay in lagu dhiiran waayo waxyaabo badan oo la filayey.
La soco wararkeena danbe iyo Soomaaliya
· admin on August 06 2012 13:40:25 · 0 Comments · 2505 Reads ·
14,614,557 unique visits